‘पती पत्नी और वो’ फिल्मको ट्रेलरमाथि किन प्रश्न ?
एजेन्सी, ‘पति, पत्नी और वो’ फिल्म बलिउडमा रिलिजको तयारीमा छ । यो फिल्मको चर्चा यसको ट्रेलरमा समावेश एक डायलगका कारण भइरहेको छ । सोमबार रिलिज गरिएको फिल्मको ट्रेलरमा एउटा डायलगमाथि मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो फिल्म सन् १९७८ मा यसै नामबाट बनेको फिल्मको रिमेक भएको बताइन्छ । फिल्ममा मुख्य नायक कार्तिक आर्यन आफ्ना साथी […]
अभिनेत्री कट्रिना कैफ हट अवतारमा
एजेन्सी, अभिनेत्री कट्रिना कैफले हट अवतारका तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । जुन तस्बिरले सामाजिक संजाल तताइ रहेको छ । तस्बिरमा कट्रिना निकै हट एण्ड क्युट देखिएकी छन् । कट्रिनाले तस्बिर एक चर्चित इन्डियन म्यागजिनका लागि खिचाएकी हुन् । तस्बिरका लागि उनले सेक्सी आउटफिटको प्रयोग समेत गरेकी छन् ।
पाँच सयका केही नोटहरुमाथि प्रियंकाको डिजर्ट
एजेन्सी, हलिउडकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले नोटमाथि डिजर्ट राखेकी छिन् । पाँच सयका केही नोटहरु कचौरामा राखिएको र त्यसैमाथि डिचर्ट राखेको देखिन्छ । प्रियंकाले हालसालै आफूभन्दा दश वर्ष कान्छा हलिउड नायक निक जोनससँग विवाह गरेकी छिन् । निक लोकप्रीय नायक हुन् । उनीसँग जोडिएपछि प्रियंका पनि हलिउडमा छाएकी छिन् ।
अभिनेत्री अदिति बुढाथोकी प्रेममा
नेपाली चलचित्र ‘कृ’ की अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीले इन्स्टाग्राम मार्फत आफू प्रमेमा परेको जानकारी घुमाउरो शैलीमा दिएकी छन् । बुढाथोकी लामो समयदेखि मूम्बईमा छिन् । गत शनिबार इन्स्टाग्राममा आफ्नो एउटा तस्विर सार्वजनिक गर्दे अदितिले भारतीय र्यापर अलिम मोरानीसंग प्रेममा रमाई रहेको संकेत गरेकी छन् । मोरानीसंगको समुन्द्रको किनारको लोकेशनमा खिचिएको उक्त तस्विरसहित अदितिले प्रेमको इमोजी राखेर […]
यस कारण ट्रोल भइन् मलाइका
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोराको इन्स्टाग्राममा एक पत्रकारले एक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा एकै दिन उनी दुईपटक देखिइन् । एकपटक उनी जिमका बाहिर देखिइन् भने अर्कोपटक डान्स क्लबका बाहिर उनलाई देखियो । भिडियोमा क्याप्सन दिइएको छ – मलाइका अरोरा जिमबाहिर र डान्स क्लबका बाहिर । उनको स्टामिना देखेर बुझ्न सकिन्न कि, आखिर उनी […]
अभिषेक भन्दा पहिले नै ऐश्वर्याले को सँग विवाह गरेकी थिइन् ?
एजेन्सी, ऐश्वर्या राय र अभिनेता अभिषेक बच्चनको विवाह भएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बच्चन परिवारको धार्मिक आस्थाका कारण र ऐश्वर्याको कुण्डली हेर्दा उनी मांगलिक भएको खुलेको थियो । त्यसैले बच्चन परिवारले पूर्ण रितीरिवाजका साथ ऐश्वर्याको विवाह पीपलको रुखसँग गराइदिए । त्यसपछि ऐश्वर्या र अभिषेकको विवाह भएको थियो । करिश्मा कपूरसँग इन्गेजमेन्ट टुटेका अभिषेक […]
बेला हदिद संसारकै सर्वाधिक सुन्दरी
एजेन्सी, गोल्डेन ब्युटी अफ ब्युटीका अनुसार संसारकै सर्वाधिक सुन्दर महिलामा अमेरिकी सुपरमोडल बेला हदिद परेकी छन् । २३ वर्षीया बेला गणितीय समीकरणको सुन्दरता अनुपातमा ९४ प्रतिशत फिट हुँदै सूचीको अग्रपंक्तिमा अटाएकी हुन् । सुन्दरताको उक्त परीक्षणमा ओठको आकारप्रकार, नाक, चिउँडो र दन्त लहरसहित अनुहारको बनावटलाई हिसाबकिताब गरिन्छ ।
एन्ड्रिया एबेलीको आम्दानीको श्रोत नितम्बः १७ करोड कमाइ
एजेन्सी, राजधानी बुखारेस्टनिवासी रोमानियाकी ३५ वर्षीया यी प्रभावशाली एन्ड्रिया एबेली इन्स्टाग्राम स्टार हुन् । इन्स्टाग्राम मोडलले फोटो पोस्ट गरेर वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कमाउने गरेकी छिन् । प्लास्टिक सर्जरी गरेर उनले नितम्ब ठूलो बनाएकी छिन् । आकर्षक नितम्बका तस्बिरहरू इन्स्टाग्राममा हालेर वार्षिक रूपमा करिब १७ करोड रुपैयाँ कमाउने गरेको उनको दाबी छ ।
इलियानाको बोल्ड फोटोले बलिउडमा तहल्का
एजेन्सी, बलिउडकी अभिनेत्री इलियाना डीक्रुजको इन्स्टाग्राममा बोल्ड तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनी सेतो स्विम सुटमा देखिएकी छिन् ।
अभिनेत्री आलिया भट्टको बोल्ड तस्बिरहरु
एजेन्सी, भारतको मुम्बईमा जन्म भएकी अभिनेत्री आलिया भट्ट भारतीय चलचित्र क्षेत्रकी एक बहु-प्रसिद्ध हुन् । भट्ट परिवारमा जन्मिएकी आलिया, प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता महेश भट्ट र अभिनेत्री सोनी राजदनकी पुत्री हुन् । सन् १९९९ मा ‘सङ्घर्ष’ नामक चलचित्रमा बाल-कलाकारको रूपमा फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी आलियाले सन् २०१२ मा ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ चलचित्रमा पहिलोपटक मुख्य भुमिका […]
यस कारण अनुष्का शर्मा भड्किइन् पूर्व क्रिकेटरसंग
एजेन्सी, लिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले भारतीय पूर्व क्रिकेटर फारुख इन्जिनियरको त्यो दाबीमाथि रोष व्यक्त गरेकी छिन् विश्व कप सन् २०१९ का बेला क्रिकेट टिमका चयनकर्ताले अनुष्कालाई चिया दिएका थिए । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीकी श्रीमतीसमेत रहेकी शर्माले ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा एउटा पोष्ट सेयर गरेर यसबारे यसरी लेखेकी छिन् ‘मनगढन्ते र फर्जी खबरसँग कसरी […]
११ एजेन्सी, उमेरले ३४ लागिसकेकी काजल अग्रवाल तामिल र तेलुगु फिल्मकी अग्रपंक्तिकी अभिनेत्री हुन् । सन् २००४ मा बलिउड फिल्म ‘क्यूँ, हो गया ना’ बाट अभिनयमा ब्रेक पाए पनि काजल दक्षिण भारतीय फिल्ममा जमिन् । हालसम्मकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने तामिल फिल्म ‘मगधीरा’ की नायिका काजल पछिल्लो पटक बलिउडमा ‘सिंघम’ र ‘स्पेसल २६’ मार्फत् देखिएकी थिइन् […]
तारा सुतरियाको हट फोटो सन्नी लियोनीसँग तुलना
एजेन्सी, बलिउड नायिका तारा सुतारियाले इन्स्टाग्राममा एउटा हट तस्बिर सेयर गरेकी छिन् । करण जौहरको फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर टु’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी सुतारियाले फिल्मभन्दा बढी फेसन र स्टाइल स्टेमेन्टका लागि चर्चामा रहन्छिन् । तस्बिरलाई देखेर उनको हटनेटको तुलना सन्नी लियोनीसँग भइरहेको छ ।
ब्रेकअपको पीडा सेलेना गोमेजले गीत मार्फत यसरी पोखिन्
एजेन्सी, हलिउडकी चर्चित गायिका सेलेना गोमेजले जष्टिन बिबरसंगको ब्रेकअपपछि आफ्नो पहिलो गीत ‘लभ यू टू, लभ मि’ सार्वजनिक गरेकी छिन् । यो गीत रिलिज गर्नुभन्दा पहिला सेलेनाले लेखेकि छिन्, ‘यो गीत पछिल्लो एल्बम को रिलीज पछि मेरो जीबनमा आएको उतारचढाबबाट प्रभावित छ । म चाहन्छु कोही पनि व्यक्तिले आशा नमारुन् ।’
‘भद्रगोल’ र ‘सक्किगो नि’वीच सहमतिमा विवाद टुङ्गियो
८ कात्तिक, काठमाडौं । हाँस्यटेलिशृङ्खला ‘भद्रगोल’ र ‘सक्किगो नि’ बीचको विवाद सहमतिमा टुङ्गिएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको शृङ्खला ‘भद्रगोल’को चरित्र भएको भन्दै मिडिया हवले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ‘सक्किगो नि’ निर्माण संस्था जेपिटी क्रिएसनले भने कलाकारको चरित्र आफूले जुनै शृङ्खलामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भएको दाबी गर्दै आएका थिए । एक […]
प्रियंका चोपडादेखि ऐश्वर्या रायसम्मले यसरी मनाए करवाचौथ(तस्बिर सहित)
एजेन्सी, बलिउड सेलिब्रिटीले करवाचौथ पर्व धुमधामसँग मनाए छन् । करवाचौथ पर्व मनाएसँगै उनीहरुले तस्बिर सोसल मिडियामा सेयर गरेका छन् । प्रियंका चोपडादेखि अनुष्का शर्मा, रबिना टन्डन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शिल्पा शेट्टी कुन्द्रा, सोनाली बेन्द्रे, मिरा राजपुतसहित थुप्रै सेलिबिैटीले करवाचौथको ब्रत बसेर श्रीमानको लामो आयुको कामना गरे । तस्बिरहरु
फिल्म पद्मावत हिट भएको एक वर्षपछि शाहिद कपुरको यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी, अभिनेता शाहिद कपुरले कलाकार सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन र अजय देवगनले संजय लीला भंसालीको निर्देशनमा राम्रोसँग काम गर्ने बताएका छन् । फिल्म पद्मावत हिट भएको एक वर्षपछि कपुरले उक्त फिल्ममा ‘हद दिल दे चुके सनम’ का कलाकारहरुसँग राम्रोसँग काम गर्ने बताएका हुन् । यो फिल्ममा शाहिद कपुरले महाराज रावल रतन सिंहको भूमिका निभाएका […]
पुलिस बोलाउन चाहन्थेँ तर नेहाले उसलाई छोडिदिइन्: विशाल ददलानी
एजेन्सी, इन्डियन आइडल ११ को अडिशनमा केही दिनअघि एक प्रतियोगीले नेहा कक्कडलाई गालामा चुम्बन गरेको मामलामा विशाल ददलानीले ट्वीटरमा आफूले पुलिसलाई बोलाउन चाहेको तर नेहाले ती व्यक्तिलाई जान दिएको बताइन् । नेहाबाहेक विशाल ददलानी र अनु मलिक पनि जजको रुपमा उक्त कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् । ट्वीटरमा एक प्रयोगकर्ताले विशाल ददलानीलाई प्रश्न सोधे, ‘सर ती व्यक्तिलाई […]
रणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाहको कार्ड भाइरल
एजेन्सी, रणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाहको कार्ड अत्यधिक भाइरल भइरहेको छ । रणबीर–आलियाको विवाहको कार्डमा उनीहरुको विवाहको मिति जनवरी २२ सन् २०२० लेखिएको छ । जबकी उम्मेद भवन प्यालेस जोधपुरमा विवाह हुने स्थान तोकिएको छ । कार्डमा अभिभावकको नाम सोनी–मुकेश भट्टको नाम लेखिएको छ । यद्यपि, यो कार्ड झुटो हो किनभने यसमा आलियाको नामको […]
यस कारण भिटेन पक्राउ परे
७ कात्तिक,काठमाडौं । भिटेनलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले जाउलाखेलबाट पक्राउ गरेका छन् । भिटेनको ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ गीतमा भएका शब्दहरु र फेसबुकमा राखेको तस्वीरका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिए । भिटेनमाथि कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले बताए ।